UMGAQO-NKQUBO WOKUGQIBELA-i-NJ kunye ne-NY yearhente yeZindlu, uMbonakalo, uKhuselo
Igqityelwe ukuvuselelwa ngoJanuwari 10, 2018
Iiofisi zomthetho zikaPatel, uSoltis kunye noCardenas ("thina" okanye "thina" okanye "yethu") ziyabahlonipha abasebenzi bethu ("umsebenzisi" okanye "wena"). Lo Mgaqo-nkqubo wabucala ucacisa indlela esiqokelela, sisebenzise, ​​sibhengeze, kwaye sikhusele ngayo ulwazi lwakho xa undwendwela iwebhusayithi yethu www.focuselaw.com kubandakanya nayiphi na enye indlela yeendaba, ijelo leendaba, iwebhusayithi yeselfowuni, okanye usetyenziso lweselfowuni olunxulumene okanye oludibene nalo (ngokudibeneyo, " Indawo ”). Nceda ufunde le Mgaqo-nkqubo wabucala ngononophelo. XA UNGAVUMI NGOKUTHETHA NGALO MGAQO-NKQUBO WOKUZIPHATHA, CELA UNGAVIZI ISIQINISEKISO.
Sinelungelo lokwenza utshintsho kule polisi yabucala nangaliphi na ixesha nangasiphi na isizathu. Siza kukwazisa malunga naluphi na utshintsho olwenzekayo ngokuhlaziya “umhla ohlaziyiweyo” wale Mgaqo-nkqubo wabucala. Naluphi na utshintsho olwenziwe okanye olutshintshiweyo luya kusebenza ngokukhawuleza ekuthumeleni umGaqo-nkqubo waBucala ohlaziyiweyo kwiSayithi, kwaye uyekisa ilungelo lokufumana isaziso esithile sotshintsho olo okanye uhlengahlengiso. Uyakhuthazwa ukuba uphonononge lo Mgaqo-nkqubo wabucala ukuze uhlale unolwazi ngezihlaziyo. Uya kuthathwa njengosaziweyo, uya kujongwa, kwaye uya kuthathwa njengolwamkele utshintsho kulo naluphi na uMgaqo-nkqubo waBucala ohlaziyiweyo ngokuqhubeka kwakho nokusebenzisa iSayithi emva komhla woMgaqo-nkqubo waBucala ohlaziyiweyo.
UKUQOKELELWA KOLWAZI LAKHO
Singaqokelela ulwazi ngawe ngeendlela ezahlukeneyo. Ulwazi esingaluqokelela kwiSiza lubandakanya:
Ulwazi oluchongiweyo njengomntu igama lakho, idilesi yokuthumela, idilesi ye-imeyile, kunye nenombolo yocingo, kunye nenombolo yobudala, ubudala bakho, isini, idolophu kunye nezinto onomdla osinika zona ngokuzithandela xa ubhalisa kwiSiza okanye xa usibhalisa Khetha ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi eyahlukeneyo enxulumene neSayithi, ezinje ngencoko ye-intanethi kunye neebhodi zemiyalezo. Akunyanzelekanga ukuba usinike ulwazi lomntu nangalo naluphi na uhlobo, nangona ke ukwaliwa kwakho kungakuthintela ekusebenziseni ezinye zeNdawo.
Ulwazi malunga neeseva zethu ziqokelela ngokuzenzekelayo xa ungena kwiSayithi, njengedilesi ye-IP, uhlobo lwebrawuza yakho, inkqubo yakho yokusebenza, amaxesha akho okungena, kunye namaphepha owabukele ngqo ngaphambi nasemva kokungena kwiSayithi.
Ulwazi lwezemali, olunje ngedatha enxulumene nendlela yakho yokuhlawula (umz. Inombolo yekhadi lesikweletu esebenzayo, uphawu lwekhadi, umhla wokuphelelwa) esingawuqokelela xa uthenga, uku-odola, ukubuyela, ukutshintshiselana okanye ukucela ulwazi malunga neenkonzo zethu kwiSayithi. Sigcina kuphela kuphela, ukuba ikhona, ulwazi lwezezimali esiluqokelelayo. Ngaphandle koko, lonke ulwazi lwezezimali lugcinwe ngumvavanyi wethu wokuhlawula, i-PayPal, i-LawPay, kwaye uyakhuthaza ukuba baphonononge umgaqo-nkqubo wabo wabucala kwaye uqhagamshelane ngqo nabo ngeempendulo kwimibuzo yakho.
Idatha esuka kwiiNethiwekhi zeNtlalo
Ulwazi lomsebenzisi oluvela kwiiwebhsayithi zokunxibelelana, ezifana ne-Facebook, iGoogle +, i-Twitter, kubandakanya igama lakho, igama lomsebenzisi lwenethiwekhi, indawo, isini, umhla wokuzalwa, idilesi ye-imeyile, umfanekiso weprofayile, nedatha kawonke wonke yabafowunelwa, ukuba uqhagamshela iakhawunti yakho kwezo zinto iinethiwekhi zentlalo.
UKUSETYENZISWA KOLWAZI LAKHO
Ukuba nolwazi oluchanekileyo malunga nawe luvumela ukuba sikunike amava agudileyo, afanelekileyo kunye namava abekelwe wona. Ngokukodwa, singasebenzisa ulwazi oluqokelelwe ngawe ngeSayithi ukuya:
● Yenza kunye nokulawula iakhawunti yakho.
● Ukonyusa ukusebenza kunye nokusebenza kweSiza.
● Ukubek'esweni kunye nokuhlalutya usetyenziso kunye neendlela zendlela yokuphucula amava akho kunye neSayithi.
● Yenza eminye imisebenzi yeshishini njengoko kufuneka.
● Cela ingxelo kwaye unxibelelane nawe malunga nokusebenzisa indawo.
● Phendula kwimveliso nakwinkonzo zabathengi.
● Vumela ukhuphelo lwee-e-vitabu
UKUQALA KWENKCUKACHA YAKHO
Singabelana ngolwazi esiluqokelele ngawe malunga neemeko ezithile. Ulwazi lwakho lunokuchazwa ngokulandelayo:
Ngomthetho okanye ukukhusela amalungelo
Ukuba sikholelwa ukukhutshwa kolwazi malunga nawe kubalulekile ukuphendula kwinkqubo yezomthetho, ukuphanda okanye ukulungisa amalungelo okuphulwa kwemigaqo-nkqubo, okanye ukukhusela amalungelo, impahla, kunye nokhuseleko lwabanye, singabelana ngolwazi lwakho njengoko kuvunyelwe okanye kufunwa ngu nawuphi na umthetho osebenzayo, umthetho, okanye umgaqo. Oku kubandakanya ukutshintshana ngolwazi namanye amaziko okhuseleko lobuqhetseba kunye nokuncitshiswa komngcipheko wetyala.
Xa uthumela izimvo, igalelo okanye nantoni na enomdla kule Sayithi, iiposi zakho zinokujongwa ngabo bonke abasebenzisi kwaye zinokusasazwa esidlangalaleni ngaphandle kweSayithi ngakwicala.
AbaNxibelelanisi beendaba zeNtlalo
Ukuba uqhagamshela kwiSayithi ngothungelwano lwasentlalweni, abafowunelwa bakho kwinethiwekhi yoluntu baya kubona igama lakho, ifoto yeprofayile kunye neenkcazo zomsebenzi wakho.
Amanye amaqela esithathu
Singabelana ngolwazi lwakho kunye nabathengisi kunye nabatyali mali ngenjongo yokuqhuba uhlalutyo jikelele lweshishini. Sinokwabelana ngolwazi lwakho kunye nabantu besithathu ngeenjongo zokuthengisa, njengoko kuvunyelwe ngumthetho.
Ukuthengisa okanye ukungabinamali
Ukuba sihlela ngokutsha okanye sithengisa yonke okanye inxenye yeeasethi zethu, sidityaniswa, okanye sifunyenwe lelinye iziko, sinokudlulisela ulwazi lwakho kwiqumrhu elilandelayo. Ukuba siphuma sishishini okanye singena kubhengezwa, ulwazi lwakho luya kuba yimali egqithiselweyo okanye efunyenwe ngumntu wesithathu. Uyavuma ukuba olo tshintshelo lunokwenzeka kwaye ukuba umntu odlulisileyo angala ukuzibophelela kwakhe esenziwe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala.
Asinaxanduva lwezenzo zomntu wesithathu owabelana naye ngeenkcukacha zobuqu okanye ezibuthathaka, kwaye asinagunya lokuphatha okanye lokulawula ucelomngeni lomntu wesithathu. Ukuba awusafuni ukufumana imbalelwano, ii-imeyile okanye ezinye izinto zonxibelelwano ezivela kwiqela lesithathu, unoxanduva lokunxibelelana ngqo nomntu wesithathu.
Sisenokubambisene nabathengisi beqela lesithathu, njengeGoogle Analytics, ukuvumela itekhnoloji yokulandela umkhondo kunye neenkonzo zokuphindaphinda kwiSayithi ngokusebenzisa ii-cookies zomntu wokuqala kunye neqela lesithathu, ukwenza, phakathi kwezinye izinto, ukuhlaziya nokulanda abasebenzisi ' Ukusetyenziswa kweSayithi, chonga ukuthandwa komxholo othile kunye nokuqonda okungcono okwenziwayo kwi-intanethi. Ngokufikelela kwiSayithi, uyavuma ukuqokelelwa nokusetyenziswa kolwazi lwakho ngaba bathengisi bangabanye. Uyakhuthazwa ukuba uphonononge umgaqo-nkqubo wabo wabucala kwaye uqhagamshelane ngqo ngqo neempendulo kwimibuzo yakho. Asidlulisi ulwazi lobuqu kubathengisi beqela lesithathu. Nangona kunjalo, ukuba awufuni naluphi na ulwazi oluqokelelweyo kwaye lusetyenziswe ngetekhnoloji yokulandela umkhondo, ungandwendwela abathengisi beqela lesithathu okanye Izixhobo zenethiwekhi yokuThetha iNketho yokuPhuma or Isixhobo sokuKhetha ukuthengisa isiDibanisi seDijithali.
Kuya kufuneka wazi ukuba ukufumana ikhompyuter entsha, ukufaka isikhangeli esitsha, ukuphucula isikhangeli esikhoyo, okanye ukucima okanye ukutshintsha iifayile zomkhangeli wakho kunokucoca ikuki ezithile, iiplagi, okanye useto.
Indawo inokuba neekhonkco kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kunye nokusetyenziswa kwemidla, kubandakanya intengiso kunye neenkonzo zangaphandle, ezingadibananga nathi. Nje ukuba usebenzise ezi khonkco ukushiya iSiza, naluphi na ulwazi olunikezela kula mntu wesithathu alukhuselekwanga ngulo Mgaqo-nkqubo wabucala, kwaye asinakuqinisekisa ukhuseleko kunye nolwazi lwakho lwabucala. Phambi kokuba undwendwele kwaye unikeze naluphi na ulwazi nakweyiphi na iwebhusayithi yeqela lesithathu, kufuneka wazise ngemigaqo-nkqubo yabucala kunye neendlela zokwenza (ukuba zikhona) zomntu wesithathu onoxanduva kule webhusayithi, kwaye kufuneka uthathe lawo manyathelo afanelekileyo, ngokubona kwakho, ukukhusela ulwazi lwakho lwabucala Asinaxanduva lokuqulathwe ngumxholo okanye ubumfihlo kunye neendlela zokhuseleko kunye nemigaqo-nkqubo yakhe nawuphi na umntu wesithathu, kubandakanya ezinye iisayithi, iinkonzo okanye izicelo ezinokuqhagamshelwa okanye ezivela kwiSiza.
Le webhusayithi isebenzisa iiGoogle API zeMephu. Unokufumana iMigaqo yeNkonzo yeeMephu zeGoogle API Apha. Ukuqonda ngcono uMgaqo-nkqubo wabucala kaGoogle, nceda ubhekisele koku ikhonkco.
Ngokusebenzisa ukuPhunyezwa kweMephu yethu ye-API, uyavuma ukubopheleka Imigaqo yenkonzo kaGoogle.
UNYANGO LWEZO NGXELO
Sisebenzisa amanyathelo olawulo, ezobuchwephesha, kunye nawomzimba ukukhusela ulwazi lwakho lomntu. Ngelixa sithathe amanyathelo afanelekileyo okukhusela ulwazi lobuqu osinike lona, ​​nceda uqaphele ukuba ngaphandle kwemizamo yethu, akukho manyathelo okhuseleko agqibeleleyo okanye angenakufikeleleka, kwaye akukho ndlela yokuhambisa idatha inokuqinisekiswa ngokuchasene nolunye uhlobo okanye olunye uhlobo lokusetyenziswa gwenxa. Naluphi na ulwazi oluvezwe kwi-intanethi lusemngciphekweni wokungenwa kunye nokusetyenziswa gwenxa ngabantu abangagunyaziswanga. Ke ngoko, asinakuqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo ukuba unikezela ngolwazi lomntu.
Asizazi sazi ulwazi okanye intengiso kubantwana abangaphantsi kweminyaka ye-13. Ukuba unolwazi ngayo nayiphi na idatha esiyiqokelele kubantwana abangaphantsi kweminyaka yobudala be-13, nceda unxibelelane nathi usebenzisa ulwazi loqhagamshelwano olunikezwe ngezantsi.
IMIGAQO-NKQUBO YOKWENZA IINGXAKI ZOKUNGENELELANI-UKUTHENGA
Uninzi lweibrawuza zewebhu kunye nezinye iinkqubo zendlela yokusebenza ziquka into ye-Do-Not-Track ("DNT") okanye ukuseta onokwenza kusebenze ukubonisa umxholo wakho wokuba ngasese ukuba ungabi nayo datha malunga nokukhangela kwakho kwi-Intanethi kuqashwe kwaye kuqokelelwe. Awukho umgangatho wethekhnoloji efanayo yokuqonda nokusebenzisa imiqondiso ye-DNT igqityiwe. Kananjalo, okwangoku asiphenduli kwiimpawu zebrawuza i-DNT okanye nasiphina esinye isixhobo esazisa ngokuzenzekelayo ukhetho lwakho ukuba lungalandeleli kwi-intanethi. Ukuba imigangatho yokulandela umkhondo kwi-intanethi yamkelwe ukuba kufuneka siyilandele kwixesha elizayo, siya kukwazisa malunga nokuziqhelanisa nohlobo oluhlaziyiweyo lwale Mgaqo-nkqubo wabucala.
UKUTHETHA NGOKULWAZI LAKHO
Unokuthi nangaliphi na ixesha uphonononge okanye utshintshe ulwazi olukwiakhawunti yakho okanye unqumamise i-akhawunti yakho ngo:
● Ukungena kuseto lweakhawunti yomsebenzisi kunye nokuhlaziya iakhawunti yomsebenzisi.
● Ukunxibelelana nathi usebenzisa ulwazi lokunxibelelana olunikezwe.
Phezu kwesicelo sakho sokuphelisa iakhawunti yakho, siya kwenza okanye isebenze iakhawunti yakho kunye nolwazi kulwazi olusebenzayo. Nangona kunjalo, ezinye iinkcukacha zingagcinwa kwiifayile zethu ukunqanda ubuqhetseba, iingxaki zokuxazulula ingxaki, ukunceda nakuluphi na uphando, ukunyanzelisa imiGaqo yokusebenzisa kunye / okanye uhambelane neemfuno zomthetho.
I-imeyile kunye noNxibelelwano
Ukuba awusafuni ukufumana imbalelwano, ii-imeyile, okanye ezinye izinto zonxibelelwano ezivela kuthi, ungaphuma:
● Ukuqaphela ukhetho lwakho ngexesha ubhalisa iakhawunti yakho kwiSiza.
Ukuba awusafuni ukufumana imbalelwano, ii-imeyile, okanye ezinye izinto zonxibelelwano ezivela kwiqela lesithathu, unoxanduva lokunxibelelana ngqo nomntu wesithathu.
ICALIFORNIA YAMALUNGELO OLUNTU OLUNGILEYO
Ikhowudi yaseCalifornia yecandelo 1798.83, ekwabizwa ngokuba ngumthetho "wokuKhanya", ivumela abasebenzisi bethu abangabahlali baseCalifornia ukuba bacele kwaye bafumane kuthi, kanye ngonyaka kwaye simahla, ulwazi malunga neendidi zolwazi lomntu (ukuba zikhona) thina Ukuchazwa kubantu besithathu ngeenjongo zokuthengisa ngqo kunye namagama kunye needilesi zabo bonke abantu besabelana ngolwazi lolwazi kunyaka wekhalenda olandulela nje. Ukuba ungumhlali waseCalifornia kwaye ungathanda ukwenza isicelo esinjalo, nceda usingenise isicelo sakho ngokubhala phantsi usebenzisa ulwazi loqhagamshelwano olunikezwe ngezantsi.
Ukuba ungaphantsi kweminyaka ye-18, hlala eCalifornia, kwaye uneakhawunti ebhalisiweyo kunye neSayithi, unelungelo lokucela ukususwa kwedatha engafunekiyo oyithumela esidlangalaleni kwiSayithi. Ukucela ukususwa kwedatha enjalo, nceda unxibelelane nathi usebenzisa iinkcukacha zonxibelelwano ezinikezwe ngezantsi, kwaye ubandakanye idilesi ye-imeyile enxulumene neakhawunti yakho kunye nengxelo yokuba uhlala eCalifornia. Siza kuqinisekisa ukuba idatha ayiboniswanga esidlangalaleni kwiSayithi, kodwa nceda uqaphele ukuba idatha ayinakukhutshwa ngokupheleleyo okanye ngokugqibeleleyo kwiinkqubo zethu.
Ukuba unemibuzo okanye izimvo malunga nalo Mgaqo-nkqubo wabucala, nceda unxibelelane nathi ku:
Iiofisi zomthetho zePatel, Soltis kunye neCardenas
I-574 Newark Ave, iSuite 307
IJersey City, NJ 07306
Ukufudukela kwelinye ilizwe laseMelika: Ukufuduka kosapho okwenzelwe abantwana abangaphezulu kweminyaka engama-21 kunye nabantwana abatshatileyo